?Ma ahan macquul, waana xad-dhaaf sida ay warbaahintu u xayaysiiso caanaha laga keeno dalka dibadiisa, waa in la xayaysiiyaa caanaha naaska hooyada? Dr. Cali C. Warsame. – Radio Daljir
Garowe, Sept 15 – Wasiiirka caafimaadka dawladda Puntland Dr Cali C/llaahi Warsame ayaa wax laga xumaado ku tilmaamey in warbaahintu ay buunbuuniso caanaha laga keeno dalka dibadiisa, isla markaana meeshaba laga saaro muhiimada dhallaanka ay u leeyihiin caanaha naaska hooyada.
Wasiirka ayaa maantey hadalkaan ka sheegey munaasabad lagu xusayay maal-maha naasnuujinta, taasoo lagu qabtey xarunta wasaaradda caafimaadka Puntland ee Garowe.
Dr Cali C/llaahi Warsame ayaa dhinaca kale sheegey, in caruurtu tahay mustaqbalkii dalka, loona baahan-yahay in masuuliyad gaar ah la iska saaro ilaalinta caafimaadka caruurta.
Dhinaca kale, Dr Shiikh Cali oo ah u qaabilsanaha Puntland hay?ada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegey, in 6-da bilood ee ugu horeysa nolasha ilmaha loo baahan-yahay in la siiyo naaska hooyada, waxaana Dr Cali uu hadalkiisa raaciyay in nafaqo iyo waxtarba dhallaanku uu ka halayo naaska hooyada, loona baahan-yahay taas iney waalidiintu fahmaan.
Ololaha maal-maha naas-nuujinta ayaa si toos ah uga socdey muddooyinkii ugu danbeeyay deegaannada Puntland. Waxaana arrintaasi ka wadashaqeynayay wasaaradda caafimaadka Puntland, Hay?ada UNICEF iyo hay?ada caafimaadka aduunka ee WHO.
Max?ed C/laahi Cali ?Kooshin?